Uyintoni umahluko weSolar PV Cable PV1-F kunye neH1Z2Z2-K?
Izixhobo zethu ze-photovoltaic (PV) zenzelwe ukudibanisa unikezelo lwamandla ngaphakathi kweenkqubo zamandla avuselelekayo ze-photovoltaic ezinje ngeepaneli zelanga kumafama amandla elanga. Ezi ntambo zephaneli yelanga zikulungele ukufakelwa okungagungqiyo, ngaphakathi nangaphandle, nangaphakathi kwemijikelezo okanye iinkqubo, kodwa hayi kwizicelo zokungcwaba ngqo.
Yenziwe ngokuchasene neMigangatho yaseYurophu EN 50618 yakutshanje kunye negama elungelelanisiweyo i-H1Z2Z2-K, ezi Cable zeSolar DC ziintambo ezichaziweyo ezinokusetyenziswa kwiinkqubo zePhotovoltaic (PV), ngakumbi ezo zifakelwa kwicala langoku ngqo (DC) kunye neDC ombane ukuya kuthi ga kwi-1.5kV phakathi kwabaqhubi naphakathi komqhubi kunye nomhlaba, kwaye ungagqithi kwi-1800V. I-EN 50618 ifuna ukuba iintambo zibe ngumsi ophantsi we-zero halogen kwaye zibhetyebhetye zitywinwe ngetini-camera abaqhubi benesiseko esinye kunye nokunxibelelana okunqamleze umnqamlezo. Iintambo ziyafuneka ukuba zivavanywe kumandla ombane we-11kV AC 50Hz kwaye zibe noluhlu lobushushu obusebenzayo -40oC ukuya + 90oC. I-H1Z2Z2-K ithatha indawo yekhebula le-TVV eyamkelweyo ye-PV1-F.
Imixube esetyenzisiweyo kule ntsimbi yokugquma yelanga kunye ne-outersheath yi-halogen yasimahla enqamlezileyo, kungoko ukubhekisa kwezi zintambo njenge "iintambo zamandla elanga ezinqamlezileyo". I-EN50618 sheathing esemgangathweni inodonga olujiyileyo kunenguqulo yekhebula le-PV1-F.
Njengakwintambo ye-TÜV PV1-F, intambo ye-EN50618 izibonelelo ezivela kukufakwa kabini kokufaka ukhuseleko. Umsi ophantsi we-Zero Halogen (LSZH) wokugquma kunye nokwenza i-sheathing kuzenza zilungele ukusetyenziswa kwimeko apho umsi ongcolileyo ungabeka umngcipheko kubomi babantu xa kuthe kwakho umlilo.
I-SOLAR PANEL CABLE NEZIXHOBO
Ukufumana iinkcukacha ezizeleyo zobuchwephesha nceda ubhekise kwiphepha ledatha okanye uthethe neqela lethu lobuchwephesha ngengcebiso engaphezulu. Izixhobo zekhefu zelanga nazo ziyafumaneka.
Ezi ntambo ze-PV zinokuxhathisa i-ozone ngokwe-BS EN 50396, ukumelana ne-UV ngokwe-HD605 / A1, kwaye kuvavanywa ukuzinza ngokwe-EN 60216. Okwexeshana, i-TÜV eyamkelweyo yi-PV1-F intambo ye-photovoltaic iya kuhlala ifumaneka kwisitokhwe .
Uluhlu olubanzi lweentambo zofakelo oluhlaziyiweyo luyafumaneka kubandakanya nonxweme kunye nonxweme oomatshini bomoya, imveliso yehydroelectric kunye nebiomass ziyafumaneka.
Ixesha Post: Nov-29-2020